Jack Wilshere Oo Sharaxay Farqiga U Dhaxeeya Manchester City Iyo Liverpool - Gool24.Net
Jack Wilshere Oo Sharaxay Farqiga U Dhaxeeya Manchester City Iyo Liverpool
Manchester City ayaa kala dhantaashay kulankoodii ugu horeeyay kooxda West Ham oo ay 5-0 ku xasuuqeen.
Waxaana cabsi ku sii abuuraya kooxaha Premier League in tababare Pep Guardiola uu sheegay inay weli u baahan yihiin inay jaanta isla helaan.
Kulankii West Ham kuma aysan soo bilaabanin Aguero iyo Bernando Silva, Joao Cancelo weli ma helin fursad uu ku ciyaaro halka Leroy Sane uu ka dhaawacan yahay.
Xiddiga khadka dhexe ee West Ham Jack Wilshere ayaana isbarbardhigay labada kooxood ee la filayo inay mar kale ku tartamaan xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League.
“Waxaan u sheegayay ciyaartoyda cusub inaysan xaalada ku adkaan doonin wixii ka danbeeya kulankaan” ayuu yiri xiddiga khadka dhexe ee West Ham Jack Wilshere.
“Meel walba oo ay Man City aadayaan waxa ay dejiyaan qorshe oo ay ku dhegenaadaan. Waxa ay heystaan ciyaartoy waa weyn oo is aaminsan islamarkaana kubada heyn karta. Xitaa haddii la raacanayo waxa ay doonayaan inay kubada helaan.
“Taageere weyn ayaan u ahay City” ayuu hadalkiisa raaciyay. “Waan jeclahay qaabka ay u ciyaaraan iyo qaabka ay kubada u heystaan. Laakiin Liverpool waxay ku ciyaartaa xamaasad ka badan tan City, kubadoodana waa mid toosan oo weerar ah.
“Kubada uma heystaan sida City laakiin waa kuwa saameyn badan leh. City ayaad isleedahay iyaga gacanta sarre leh madaama ay horyaalka heystaan laakiin Liverpool waa horyaalka Yurub.
“Sannadkii hore labadaan kooxood ayaa ugu fiicnaa. City ciyaartoy ayay keensatay, Liverpool waxba kuma soo darin kooxdooda. Laakiin kooxda Liverpool markii horeba waa ay fiicnaayeen. Uma sahlanaan doonto kooxaha ka horimaanaya labadaan kooxood.”